Leencoo Lataa: 'Furmaatni dhibdee nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa sammuu keenyaan ala miti' - BBC News Afaan Oromoo
Namni siyaasaa gameessii Obbo Leencoo Lataa rakkoo nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa jiru mariin malee waraanaan furuun ittuu hammeessuu ta'aa jedhan.
Haala amma jiruun filmaata gaggeessuunis gaarii hin ta'us jedhu.
Jalqabumarraa eegalee mootummaan qaama hidhatee nannoolee kanatti socho'u waraanaan dhabamsiisuuf yaaluun sirrii akka hin taane ejjennoon qabu ibseen turee jedhanii ammas falli jiruu jaarsummaan furuudhaa jedhan.
''Rakkina sana furuudhaaf Gaaddisni Hooggansa Oromoo dandeettis dirqamas qaba jedheen amana'' kan jedhan Obbo Leencoon, rakkoo kana ''humnaan furuuf carraaquun hammeessuu malee bu'aa hin fiduu'' jedhan.
Obbo Taayyee Danda'aa waa'ee Lixa Oromiyaa maal jedhan?
Gurmaa'inni dhaabbileen siyaasaa Oromoo haala nageenyaa fi dhimmoota waloo Oromiyaa fi biyyaarratti mari'achuuf walta'uun hundeessan, Gaaddisni Hooggansa Oromoo, erga walgahee mari'atee bubbuleeraa jedhu Obbo Leencoon.
Walgahiin kun maaliif ji'oota muraasa darbe wal gahee mari'achuu akka dhabe kan hin dubbanne Obbo Leencoon, gaaddisni kun hanga irraa eegamu hin hojjennee jedhamuun sadarkaa komatamurra gaheera natti hin fakkaatuu jedhu.
Torban tokko dura MM Abiy Ahimad gaaffiilee miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii yoo kennan qaamolee hidhatanii socho'an waliin karaa nagaan rakkoo jiru hiikuuf mootummaan fedha qabaachuu beeksisanii ture.
Mootummaan Naannoo Oromiyaas ejjennoo walfakkaatu qabaachuufi rakkoo jiru jaarsummaan furuuf sochiin eegalamuu karaa dubbi himaa naannichaa beeksiseera.
Obbo Leencoon furmaatni rakkoo kanaa ''marii mootummaa fi dhaaba tokkoo qofa osoo hin ta'iin marii dhaabota Oromoo hundaa barbaada'' jedhan.
''Furmaatni isaa waan sammuu keenyaan alaa ta'ee natti hin mul'atuu'' kan jedhan Obbo Leencoon, jaarsa ta'anii rakkoo kanaaf furmaata barabaaduuf fedha akka qaban dubbataniiru.
''Hojiin koo ammaa Jaarsummaadha. Yoon gaafatame kana hojjechuuf qophiidha. Garuu qaamni waldhabbii keessa jiru jalqaba sirraa amantii qabaachuu qaba.''
''Ammatti biyyi kun filmaataaf qophii miti''
Paartileen Siyaasaa filannoo biyyoolessaa bara kana gaggeeffamuuf sochiilee garaagaraa gochuutti jiru.
Paartileen Oromoo keessumaa gama mormitootaan waliin hojjechuuf fedhiin akka jiru mallatooleen agarsiisan jiraataniis, mootummaa himachuufi quba walitti qabuun ni mul'ata.
Haalli kun namoota miidiyaa hawaasaarratti barreessan tokko tokko yaaddeessaa jira.
Obbo Leencoon gama isaaniin ''ammaatti biyyi kun filmaataf qophii mitii'' jedhu.
''Rakkina baay'eetu jira, rakkinni nageenyaa jira, naannoo tokko diigamee haaraatti hin ijaaramnee, naannoon tokkommoo fincilee ajaja mootummaa waaltaan ala jiraa, rakkina kana ammoo filmaataan furuun hin danda'amu.''
Haala kan keessatti filamaata gaggeesuun gaarii hin ta'uu amanta jedhu qabu obbo Leencoon.
''Oromiyaa keessattis paartileen ammatti waldorgomuurra wal wajjin dhaabannee dhimmoota jarjarsiisaa ta'an kan akka dhibuu tasgabbii, hojii dhabdummaa dargaggootaa fi isa kana kanarrati xiyyeeffachuu wayyaa'' jedhan.